Ukutshiza kweAdaptil (eCanada)
Eli phepha linolwazi ngeAdaptil Spray ye ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Iimpawu zeAdaptil Spray
Izilumkiso kunye nezilumkiso kwiAdaptil Spray
Ulwalathiso kunye nolwazi lwedosi yeAdaptil Spray
Inkampani: ICeva Animal Health
Yintoni i IPHEPHA ® ?
Izinja ezingoomama zinxibelelana neenjana zazo ngemiyalezo yendalo ekhutshwe emoyeni. Le miyalezo ithuthuzelayo ibizwa ngokwesayensi ngokuba yiPhehones yeeNja. Le miyalezo ye-canine ingenavumba iqondwa kuphela zizinja. Amakati nabantu abachaphazeleki. Le miyalezo ithuthuzelayo ibonelela ngomqondiso oqinileyo wokhuseleko kunye nokuthuthuzela izinja zeminyaka yonke. IPHEPHA ®ithumela ikopi yale miyalezo ethuthuzelayo ukunceda inja yakho izive izolile kwaye izithembile kwiimeko zoxinzelelo.
IPHEPHA ®luluhlu olusebenzayo, oluqinisekisiweyo lwezonyango *, izisombululo ezingezizo iziyobisi ukuthuthuzela iinjana kunye neenja kwiimeko zoxinzelelo.
Izinja zabantu abadala:
- IPHEPHA ® Ezothutho Tshiza iyanceda ukuzola kunye nokuthuthuzela inja yakho ekuhambeni.
ukuxuba i-naproxen kunye ne-ibuprofen
Kunye IPHEPHA ®, Inja yakho iziva izolile kwaye ikhululekile ngalo lonke ixesha.
Ukuziphatha kwenja kuhlala kunzima kakhulu kwaye zininzi iindlela zokunceda ukuyilawula.
IPHEPHA ®sisisombululo sepheromone esisebenzayo ngokwezonyango. Ayisiyo into yokuthomalalisa okanye yokuthomalalisa. Kufunyaniswe ukuba ukunceda ukuxhasa izinja ezinengxaki yoxinzelelo oluncinci. Kwezinye iimeko, unyango olongezelelekileyo kunye / okanye uhlengahlengiso lokusingqongileyo lunokufuneka kwaye ingcebiso kufuneka ifunwe kugqirha wezilwanyana okanye kugqirha wezilwanyana ofanelekileyo. Ukuba kukho iimpawu zesifo, dibana nogqirha wezilwanyana.
* Ukusebenza kwe IPHEPHA ®ibonakalisiwe kwizifundo ezininzi zeklinikhi ezipapashwe kwiijenali ezaziwayo zesayensi okanye zanikezelwa kwiinkomfa zamazwe aphesheya (phantsi kwe-DAP®igama kude kube ngu-2011).
Fumana uncedo ngakumbi www.,
QHUBEKA NOKUFIKELELA KWABANTWANA / FUNDA UKUPAKISWA PHAMBI KOKUSETYENZISWA
IPHEPHA ® ayinazikhombisi zokusetyenziswa kunye nolunye unyango.
I-canine ekhangayo i-pheromone analogue
Iziphumo ze-ADAPTIL®Ukutshiza kuthatha iiyure ezi-4 ukuya kwezi-5.
Ibhotile nganye ye-60 ml ihambisa malunga ne-400 sprays (+/- 50 uses).
Faka izitshizi ezisi-8 ngesicelo ngasinye.
● FUTHA Ubungakanani bokuhamba
Ukutsha kwe-monistat 1 kuthetha ukuba kuyasebenza
Ibhotile nganye ye-20 mL ihambisa malunga ne-125 sprays (+/- 16 uses).
ipilisi etyheli mc 13
Ulwelo olunokutsha kakhulu kunye nomphunga.
Ingabangela ukozela okanye isiyezi.
Kubangela ukucaphuka kwamehlo.
Musa ukutshiza ngqo kwinja okanye ekutyeni.
Gcina kude nobushushu, iintlantsi, amadangatye avulekileyo, iindawo ezishushu. Akutshaywa.
Kuphephe ukuphefumla umphunga.
Ukuba emehlweni: hlamba ngononophelo ngamanzi kangangemizuzu eliqela.
Gcina kwindawo efanelekileyo yomoya. Hlala upholile.
Lahla inkunkuma okanye izikhongozeli ezisetyenzisiweyo ngokwemigaqo yengingqi. Ukupakisha okungenanto ngokupheleleyo ngaphambi kokulahlwa. Hlaziya ngokutsha okanye ulahle ngokuhambelana nomthetho wangoku.
IPHEPHA ® uphawu lokuthengisa olubhalisiweyo lweCeva Santé Animale S.A.
ICeva Animal Health Inc.- Umthombo we-6-1040 Umthombo iSt
Ngaphantsi kwelayisensi ukusuka Yiya e
CEVA ZEMPILO INC.
I-6-1040 FOUNTAIN ST. N., ICAMBRIDGE, ON, N3E 1A3
Itholi yasimahla: Ngama-800-510-8864
Indawo yeWebhusayithi: www.ceva-canada.ca
Yonke imizamo yenziwe ukuqinisekisa ukuchaneka kolwazi lwe-Adaptil Spray olupapashwe ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yaseCanada okanye ukufakwa kwephakheji.
uqhagamshela njani ilaptop kwiprinta
Imiphumo emibi yesifo se-boric acid
ucime njani umlilo
Impembelelo yecala lejeli yasebukhosini